(15/01/2010) Mbola tsy votsotra ilay Maoritaniàna toniandahatsoratra, Hanevy Ould Dahah · Global Voices teny Malagasy
(15/01/2010) Mbola tsy votsotra ilay Maoritaniàna toniandahatsoratra, Hanevy Ould Dahah
Voadika ny 14 Janoary 2019 6:20 GMT
Sarin'i Hanevy tao Etazonia, avy amin'i Nasser Weddady
Ny Jona 2009, ny Global Voices Advox no voalohany nitatitra hoe nosamborina noho ny fanehoankevitra napetrany tao amin'ny tranonkala i Hanevy Ould Dahah, ilay Maoritaniàna toniandahatsoratra mitantana ilay tranonkala avy amin'ny hery ankavia Taqadoumy. Ould Dahah, voaheloka 6 volana an-tranomaizina, dia tokony ho navotsotra tamin'ny 24 Desambra, kanefa, ny 26 Desambra dia nisy tatitra avy amin'ny bilaogera Nasser Weddady ao amin'ny Dekhnstan, hoe mbola voatazona ihany i Ould Dahah. Ao amin'ny lahatsoratra voalohany indrindra amin'ilay bilaogy, nanamarika i Weddady hoe:
io no antony anoratako bilaogy. Ny raharahan'i Hanevy dia tsy hoe bilaogera/mpanao gazety iray hafa fotsiny natsipy any ho any fotsiny noho ny resaka politika. Iray amin'ireo tena misy fiantraikany lalina eto amin'ny firenena izy: raha toa ny Jeneraly Aziz tsy mahatsiaro ho voatohintohina amin'ny fomba fitondrany mpanao gazety, dia hilaza tsotra izao izy fa malalaka ny famoretany ireo feo mpanohitra, tsy atahorany izay ho vokany. Ndeha ho ambarantsika hoe ity no ILAY tranga fisedràna ho an'ny hoavin'ny zo sivily ao anatin'ilay firenena bitika atao hoe Maoritania, izay mazàna no adino.
Ny faha-28-n'ny volana, notaterin'i Weddady fa nanomboka nitokona tsy nisakafo i Ould Dahah. Ny 5 Janoary, ny Kaomity Mpiaro ny Mpanao Gazety (CPJ) dia nanameloka ireo manampahefana ao Maoritania noho ilay fitazonana an'i Ould Dahah nihoatra noho ny andro tokony namotsorana azy, ary ny Tambajotra Arabo Mpanome Vaovao Momba ny Zon'Olombelona (ANHRI) dia niantso ny governemanta maoritaniàna mba hanaja ny lalàna. Hatreto, tsy misy mitatitra momba ilay raharaha any amin'ireo loharano mpilaza vaovao mahazatra.
Hatramin'ny 10/01/2010, mbola voatàna foana i Ould Dahah. Ny 14 Janoary, nandefa lahatsoratra i Nasser Weddady ao amin'ny Dekhnstan :
Raha ara-taratasy dia tokony nampanantsoina hiatrika ny fitsaràna antampony i Hanevy Ould Dahah androany (14 Jan) taorian'ny fampiantsoana azy tampoka hiseho manoloana ny fitsarava avo ao amin'ny firenena. Raha tsy hoe tsy araka ny lalàna ny dingana natao. Aza diso fihevitra, tsy tampotampoka eo akory ny governemanta maoritaniàna no hahita hoe nanao hadisoana izy tamin'ity raharaha ity, miezaka fotsiny izy ny hanarontsarona ny raharaha tena tsy mifanaraka amin'ny lalàna nitondràny an'i Hanevy. Raha ny marina, mety hiampanga azy aminà vesatra hafa ireo manampahefana!
Notononin'i Weddady ihany koa ny anaran'ireo manampahefana tafiditra amin'ny fitazonana an'i Ould Dahah, saingy avy eo izy nilaza fa, “ny sedra iainan'i Hanevy dia didy fanapahana avy amin'ireo manampahefana faratampony ao Maoritania: Jeneraly Mohamed Ould Abdelaziz. Ny rafitra iainan'ireo Maoritaniàna dia ny hoe izy, ary izy irery ihany, no manana ny fahefana hamono sy hamelona, na iza na iza manao hadalàna, mba hanomboana azy amin'ny hazo fijaliana.”
Tantaran'ny Maoritania farany
23 Jolay 2020Afrika Mainty
Maoritania: Antanantohatra arabolonkoditra toa tsy laitran'ny fanovana
18 Jolay 2019Afrika Mainty
Famoretana taorian’ny fifidianana tany Maoritania : nesorina ny sakana tamin'ny Aterineto saingy mbola notànana ny mpanao gazety
08 Mey 2019Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana